Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): July 2011
ပါရမီရှင်၊ ပညာရှင် (အပိုင်း ၄- အတုလ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်)
ပါရမီရှင်၊ ပညာရှင် တို့၏ ဇာတာကို စစ်ဆေးလေ့လာကြမည် ဆိုလျှင်- မပါမဖြစ် ပါဝင် သင့်သော ဇာတာ တစ်စောင်မှာကား- မြန်မာ့သမိုင်း တွင် အထင်ရှားဆုံး ဗေဒင်ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သော၊ “မကာရ လောပ- မ, တစ်လုံးကျေ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်” ဟု ကျော်ကြား ခဲ့သော တောင်တွင်းကြီးသား ဆရာတော် အရှင် ဉာဏာ လင်္ကာရ ပင်ဖြစ်ပါ၏။
မ, တစ်လုံးကျေ ဘွဲ့သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်မှာလည်း ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် အနေဖြင့် မသိမတတ် သော အရာများ မရှိဟုပင် ဆိုရလောက်အောင် ထူးခြားသော ပါရမီရှင် ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပါပင်။
ဆရာတော်၏ အကြောင်းကို လေ့လာသော အခါ ပထမဆုံး တွေ့ရသည်မှာ “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” တွင် ဖေါ်ပြထားသော- မွေးသက္ကရာဇ် ကိစ္စပင် ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဆိုက်တွင် ဆရာတော် ၏ မွေးသက္ကရာဇ်ကို ၁၀၆၈- ခုနှစ်၊ ကဆုန် လပြည့်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့ဟု ထိုဆိုက်တွင် ယခင်က ဖေါ်ပြထားခဲ့သဖြင့်- ထိုအချက်ကို အမှီပြုထားကြသော - အခြားခြားသော ညီအကိုတို့၏ ဆိုက်များတွင်လည်း- ဆရာတော် အား ၁၀၆၈- ခုနှစ်၊ ကဆုန် လပြည့် ဖြင့်သာ လက်ဆင့်ကမ်း ရေးသား ဖေါ်ပြထားခဲ့ကြသည်ကို သတိပြု မိပါသည်။
ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူသော ခုနှစ်သက္ကရာဇ် မှာမူ- ၁၁၂၃-ခုနှစ် ဖြစ်သည်မှာ အးလုံး ကိုက်ညီ ပါ၏။ စင်စစ်အားဖြင့် သိရှိထား ရသည်မှာ ဆရာတော်သည် သက်တော် ၃၇-နှစ် အကျော် သက်တော် ၃၈-နှစ်အတွင်း မှာပင် ပျံလွန်တော်မူခြင်း ဖြစ်သော်လည်း- မွေးသက္ကရာဇ် ကိုမူ ၁၀၈၆ နှင့် ၁၀၆၈ လွဲချော်နေမှု ကြောင့်- အများသော ညီအကို ဆိုက်များ အနေဖြင့် ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူသော အသက်မှာ သက်တော် ၅၆-နှစ်၊ ၀ါတော် ၃၆-၀ါဟု ဖေါ်ပြထား နေမိကြ ပါသည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” တွင်လည်း ပြင်ဆင်ရန် စီစဉ် ထားပြီးပြီ ဖြစ်ပါ၍- နောက်တွင် အားလုံး အနေဖြင့် ဆရာတော်၏ မွေးဖွားသော သက္ကရာဇ် နှင့် ပျံလွန်ချိန် သက်တမ်း အမှန်ကို အွန်လိုင်း ညီအကို အားလုံး တစ်ညီ တစ်ညွတ်တည်း လေ့လာ နိုင်ကြမည်ဟု ယူဆ မိပါသည်။
မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ အတုလ ဆရာတော် ၂-ပါး ရှိခဲ့ပါ၏။ အခြားသော ဆရာတော် မှာ အလောင်းမင်းတရားကြီး “အတုလ ယသ မဟာဓမ္မ ရာဇဂုရု” ဘွဲ့ တံဆိပ်ဖြင့် ကိုးကွယ်သော ဒီပဲယင်းမြို့၊ ဥသျှစ် ကျေးရွာ ဇာတိ လူမည် ဦးပန်းထွေး၊ ရဟန်းဘွဲ့ အမည် အရှင် ယသ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း- ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် အတင် ဂိုဏ်း နှင့် အရုံဂိုဏ်း ဟူ၍ ကွဲပြားကြရာတွင် ရှုံးသောကြောင့် ရာဇ၀တ်တော်ဖြင့် လူထွက် ခဲ့ရပါသည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီး အမေး၊ အတုလ ဆရာတော် အဖြေ စာအုပ်ကိုလည်း မြန်မာပြည်တွင် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင် ပါ၏။
အတုလ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် အနေဖြင့်မူ ပုတ္တောဝါဒ ဆုံးမစာ စသော ဆုံးမစာ များ၊ မာရ်နတ် အောင် ဘုရားရှိခိုးစာများ အပြင်၊ အဘိဓမ္မာ အကောက် ကျမ်းများ၊ ဆေးကျမ်းများ၊ ဓာတ်ကျမ်းများ၊ နက္ခတ်ကျမ်းများ၊ ဗေဒင်ကျမ်းများ နှင့် ဇမ္ဗူ့တန်ဆောင်ကျမ်း၊ ဇမ္ဗူ ကွန်ချာကျမ်း၊ ကဝေသာရကျမ်း၊ များကိုလည်း ပြုစု ရေးသား တော်မူခဲ့သည်။
အောက်ပါ ကျမ်းတို့မှာ ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် ရေးသား ပြုစုခဲ့သော ကျမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။
မြမ္မာ ၀စ္စ၀ါစက ကျမ်း၊
ဂဏ္ဍိပဗ္ဗ သမ္ဗန္ဓ ဆက္က ၀ဏ္ဏနာ ကျမ်း၊
သုတ္တ မာလာဝုတ္တိ ကျမ်း၊
ပုဒ်စစ် သဒ္ဒါ စစ် သံဝဏ္ဏ နာ နည်းလေးဆယ် သဒ္ဒါငယ်၊ ကစ္စာယန အရကောက်ကျမ်း
အဘိဓမ္မာ ဂမ္ဘီရ ရတ္တဒေသနာ အရကောက်ကျမ်း၊
ဒွါဒသ စိန္တန နက္ခတ်ကျမ်း၊
ကပ္ပလင်္ကာရ ကျမ်း၊ (မြန်မာ ဘာသာဖြင့် ပထမဆုံး စတင်ပြုစုခဲ့သူမှာ ရှင် ဥတ္တမသီရီ ဖြစ်၍- မြန်မာ ဘာသာအားဖြင့် မူရင်းကျမ်းကို အချို့က ဥတ္တမသီရီ ကျမ်းဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။ စကားချပ်)
ကပ္ပ ၀ဏ္ဏ နာကျမ်း၊
လက်ရိုး ဗေဒင် ဋီကာကျမ်း၊
မကာရလောပ အကျော် ခင်ကြီးဖျော် သက္ကရာဇ် ၁၀၈၆-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့ (ခရစ် သက္ကရာဇ်- ၁၇၂၄-ခုနှစ်၊ မေလ ၉-ရက်၊ အင်္ဂါနေ့) နံနက် ၄ချက်တီး ကျော်၌ (ရှေး မြန်မာအချိန် စနစ်အရ အာရုံတက် အချိန် ဖြစ်ပါသည်။) တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ်၊ မြို့လုလင်မြို့၏ မြောက်ဖက် ပုတီးကုန်းရွာသား အဖ ဦးတိုးပြေ နှင့် အမိ ဒေါ်မယ်ကြာ တို့မှ ဖွားမြင်သည်။
ငယ်မည်မှာ မောင်ဖျော် ဖြစ်ပြီး- မြို့လုလင်မြို့ ကန်ဦးကျောင်း ဆရာတော် ထံတွင် စတင်ပညာသင်ကြားသည်။ ဆရာတော် လောင်းလျာသည် ငယ်စဉ်ကပင်- အတိုင်း အဆမဲ့ အစားကြူး တတ်သဖြင့် ငယ်ဆရာ ဖြစ်သူ ကန်ဦး ဆရာတော်မှ- “မောင် ပဉ္ဇင်း ဒီအတိုင်းသာ ဆိုယင်ဖြင့် အသက်မရှည် နိုင်” ဟု သတိပေး ခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာ သင်ပုန်းကြီးကို နေ့ချင်း တတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
သုံးလအတွင်း ပရိတ်ကြီး ၊ နမက္ကရ၊လောကနီတိဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ ပါဠိ အနက်တို့ကို နှုတ်တက်ဆောင်၍ သဘောသဘာဝ တို့ကိုလည်း မိမိရရ သိရှိလှသဖြင့် မေးသမျှ ခဲရာခက်ဆစ် တို့ကို ရုတ်တရက် ဖြေဆို နိုင်ပေသည်။
၁၀-နှစ်သားအရွယ်တွင် ကန်ရိုးကျောင်း ဆရာတော်ကို ဥပဇျွာယ်ပြု၍ ရှင်သာမဏေ ဘ၀မှာ သဒ္ဒါ၊ သင်္ဂြိုဟ်၊ မာတိကာ၊ ဓာတုကထာ၊ အဘိဓာန်၊ ဆန်း၊ အလင်္ကာတို့ကို ကောင်းစွာ သင်ကြားတတ်မြောက်သဖြင့် ဆရာသမားတို့၏ ချီးကျူး မြှောက်စားခြင်းကို ရရှိလေသည်။
အသက် ၂၀ ပြည့်သောအခါ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်၍ ရှင်သာမဏေဘ၀က ရရှိမှည့်ခဲ့သော ရှင်ဉာဏဘွဲ့မှ ဦးဉာဏ ဘွဲ့သို့ မှည့်ခဲ့သော်လည်း ရဟန်းဘွဲ့ ဦးဉာဏ အမည်မှာ မထင်ရှား မကျော်စော၊ ငယ်မည် မောင်ဖျော်မှ ရဟန်းဖြစ်သဖြင့် “ခင်ကြီးဖျော်” ဟူ၍သာ ကျော်စော ထင်ရှားလေသည်။ ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်လျှင် တောင်တွင်းကြီးသို့ သွား၍ စာတတ်အကျော် ဆရာတော်ဘုရားကြီးများထံ နည်းခံ၍ ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာကျမ်းစာတို့ကို ကျနသေချာစွာ သင်ယူပြီးလျှင် ဗေဒင်၊ သက္ကဋ၊ ဓာတ်ဗိန္ဓောပညာ၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ စသည် တို့ကိုလည်း ခဏလွယ်ကူ တတ်မြောက်တော်မူသဖြင့် နိုင်ငံတွင် အလွန်တရာ ထင်ရှား ကျော်ကြားလေသည်။
ဆရာတော်နှင့် ကျောင်း ရေစက်ချ နိမိတ်။
ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် နှင့် ဖခမည်းတော် ဖြစ်သူတို့-မြို့သို့ တက်လာခဲ့ရာတွင်- ဆောက်ထားသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို တွေ့၍ ဆရာတော်မှ အလှူခံရန် ကြံစည်ရာ “အရှက်ကွဲနေပါဦးမည်” ဟု ဖခမည်းတော် က တားမြစ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဖခမည်းတော် ဖြစ်သူအား စနည်းနာရန် အပြင်သို့ စေလွှတ်လိုက်၏။ ဖခမည်းတော် ပြန်လာသော်- ဘာများ ထူးထူးခြားခြား တွေ့ခဲ့ရပါသလဲဟု ခင်ကြီးဖျော် မှ မေးရာ- ဘာမှ ထူးထူး ခြားခြား မတွေ့ဟု ဖခမည်းတော် က ပြန်ဖြေ၏။ “တစ်ခုခုတော့ တွေ့ရမှာပေါ့- တွေ့တာလေး ပြောစမ်းပါ” ဟု ခင်ကြီးဖျော် မှ မရ မက မေးရာ “ထွီ-စောစော စီးစီး မိန်းမတစ်ယောက် ထိုင်ပြီး အပေါ့သွားနေတာပဲ တွေ့တယ်။” ဟု ခမည်းတော် မှ ပြန်ဖြေရာ- အဖြေရသွားသော ခင်ကြီးဖျော် သည် ခမည်းတော် လက်ကိုဆွဲပြီး- ထိုကျောင်း၏ ကျောင်းဒကာထံသွား အလှူခံ၏။ ကျောင်းဒကာမှ လည်း ရေစက်ချ လှူဒါန်း လိုက်ပါ တော့သည်။
ဆရာတော် ကောက်လိုက်သည်ကား ရေစက်ချ နိမိတ်ပင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
မ,တစ်လုံးကြေ ဆရာတော် ဖြစ်ရပုံ။
ထိုသို့ တူမတူအောင် လောကဓမ္မ နှစ်ဌာနတွင် တတ်ကျွမ်း လှသော ဂုဏ်၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ် တို့နှင့် ပြည့်စုံတော် မူသောကြောင့် နေ လအသွင် အလွန် ထင်ရှားသဖြင့် “လူသတင်း လူချင်းဆောင်၊ ပန်းသတင်း လေညှင်း ဆောင်” ဆိုသလို လူအများ၏ နှုတ်ဖျားမှ တဆင့်စကား ပေါက်ကြား၍ သွားကာ ၁၁၁၆-ခုနှစ် (ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၅၄) တွင် အလောင်းမင်း တရားကြီးနှင့် သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ (နောင်သော အခါ နောင်တော်ကြီးမင်း) တို့က ရတနာ သိင်္ဃ ကုန်းဘောင်မြို့သို့ ပင့်ဆောင်ပြီးလျှင် မဟာဘုံသာ ကျောင်းတော်ကြီး ကိုလည်း ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသည်။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၃ -ခုနှစ် (ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၆၁) ခုနှစ်တွင် “ဉာဏာ ဘိဓမ္မာ လင်္ကာရ မဟာဓမ္မ ရာဇာဓိ ရာဇဂုရု” ဟူသော ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းသည်။ သံဃရာဇာ သာသနာပိုင် အဖြစ်သို့ တင်မြှောက်ခံရသည့်အပြင် လောကီ၊ လောကုတ္တရာ အဖြာဖြာ တို့၌ တူမတူအောင်၊ အတုမရှိအောင် တတ်မြောက် တော်မူသဖြင့် “အတုလဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်” ဟူ၍လည်း ရှင်လူအများတို့က ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ (ဤနေရာတွင်လည်း “၀ီကီမြန်မာ ဆိုဒ်” တွင်ဖေါ်ပြထားချက်များ နှင့် အနည်းငယ် ကွဲပြားချက်များ ရှိပါသည်။)
တစ်ဖန် ထိုကဲ့သို့ သံဃ ရာဇာ ဘွဲ့ရသူ ဆရာတော် တစ်ပါးမှာ- အင်းဝ ခေတ် ပွဲကျောင်း ဆရာတော် လက်ဝှေ့လက်ပမ်း ဖြင့် နာမည် ကြီးသူ အောင်စည်းခုံ သံဃ ရာဇာ ဆရာတော် ဖြစ်၏။
တစ်ခါတွင်- ဆရာတော်၏ ကျောင်းတွင် အလှူအတန်း ရှိသောကြောင့်- အတီးအမှုတ် တူရိယာ သမားများရောက်ရှိ၍ တီးမှုတ် အသံစမ်း နေကြသည် ဟု ဆိုပါသည်။ ဆရာတော်မှ- ၄င်းတို့၏ တီးမှုတ်ပုံကို နားထောင်ပြီးနောက် ဆိုင်းသမား အား မည်သို့တီး၊ ပတ်ဝိုင်းသမား အား မည်သို့ တီး၊ နှဲသမားအား မည်သို့ မှုတ် စသဖြင့် တစ်ဦးချင်းအား- တီးမှုတ် စေပြီးနောက်တွင်- အားလုံးတို့ကို တစ်ပြိုင်တည်း တီးမှုတ် စေလိုက်ရာ လွန်စွာ ပြောင်မြောက်သော တီးလုံး အနုပညာကို ကို ရရှိသည်ဟု မှတ်သားခဲ့ဘူးပါသည်။
ဤဖြစ်ရပ် အကြောင်းကို ရေးသားသော အနေအထား အခြား ပုံစံ မူကွဲများရှိပါသေးသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ- ဤအချက်သည်လည်း ဆရာတော်အား မသိ မတတ်သော ပညာမရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည့် သက်သေ အနေအထား ပင်ဖြစ်ပါ၏။
ဆရာတော်နှင့် ငါးဖမ်းခြင်း အတတ်။
တစ်နေ့တွင် နောင်တော်ကြီးမင်းမှ- ဆရာတော်အနေဖြင့် အခြားသော ပညာများ မည်မျှပင် တော်သည် ဖြစ်စေ- ပါဏာတိ ပါတ ကံကို စောင့်ထိန်း ရသော ဘုန်းကြီး တစ်ပါး အနေဖြင့် ငါးဖမ်း ခြင်း အတတ်၊ တံငါသည် အတတ်တော့ တတ်နိုင်မည် တော့ မထင်ဟု ဆိုကာ- မြို့တော်တွင် အတော်ဆုံး ဖြစ်သော တံငါသည်အား- ဆရာတော်နဲ့ ငါးဖမ်း ပြိုင်ကြည့်ချေဟု စေလွှတ်လိုက်သည် ဟု ဆိုပါသည်။
ဆရာတော် အနေဖြင့် ၀ိနည်း ကို စောင့်ထိန်းရ ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တိုင် ငါးဖမ်းခြင်း မပြုလုပ်ပဲ- တံငါသည် မဟုတ်သော အခြား သူတစ်ဦးအား- မည်သည့် ရေတက်ချိန်တွင်- မည်သည့် အစာကို သုံး၍ မည်သည့် နေရာတွင် ကွန်ချက် ချရမည်ဟု ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု လေ့လာ မှတ်သား ခဲ့ဘူး ပါသည်။ ဆရာတော်၏ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဖမ်းသူ ရမိသော ငါးအရေ အတွက် သည်- အတော်ဆုံး တံငါသည် ဖမ်းသော ငါးအရေအတွက် အဆများစွာ များပြား နေခြင်းကြောင့်- ရှင်ဘုရင် မှ ထပ်မံ လေးစားရသည် ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုဖမ်းမိသော ငါးများ အားလုံးကို ဆရာတော်၏ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဘေးမသင့် စေရပဲ- ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ရပါသည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာ တွင်လည်း- တင်ပြပုံ ကွဲလွဲမှုများ အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း - ဤအချက်သည်လည်း ဆရာတော် အနေဖြင့် အားလုံး ကို သိနေ၊ တတ်နေကြောင်း ပြဆိုခဲ့သည့် အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်နှင့် စစ်တုရင် အတတ်။
တစ်ခါတွင်လည်း- ဘုရင်မှ နန်းတော်တွင် အတော်ဆုံးသော စစ်တုရင် သမား တစ်ယောက်အား- ဆရာတော်ဆီသွားပြီး- ဆရာတော်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားစေရန် စေလွှတ် ခဲ့ရာတွင်- ပထမဆုံးပွဲတွင် ဆရာတော်မှ- သက်ဆိုင်ရာ ရထားရုပ်၊ နယ်စားရုပ်၊ မြင်းရုပ်များ မည်သို့ ရွှေ့ရ သည်ကို သင်မေး- မေး ၍ ကစားခဲ့ရာ- ထိုပွဲတွင် သရေကျ၍- နောက်ပိုင်း ပွဲများတွင် ဆရာတော်ကသာ အနိုင်ရသည် သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့်- လောကီ အတတ်၊ လောကုတ္တရာ အတတ်များကို တတ်ကျွမ်းတော် မူသဖြင့် ဆရာတော် အနေဖြင့် မသိသော၊ မတတ်သော အတတ်များ မရှိသောကြောင့် မ,တစ်လုံးကြေ ဆရာတော် ဟုသတ်မှတ် ခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ ဆိုရာတွင်- ဆရာတော်မှ- တစ်နေ့လျှင် အချိန် ၈-ပိုင်းသော နည်းဖြင့် ခယားဇောက် ဖြင့် ဟောပြောခြင်းကို အသုံးပြု တော်မူ၍- အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာ ဖြင့်ပင် ထင်ရှားသော အခြား ပညာရှိ တစ်ဦးဖြစ်သူ- မုတ္တုတ် ဆရာတော် အနေဖြင့်မူ အချိန် ၅-ပိုင်း ပိုင်းသော စနစ်ကို အသုံးပြုသည်ဟု မှတ်သား ခဲ့ဘူးပါသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ- တောင်တွင်းဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် ရေးသားပြုပြင် စီရင်တော်မူသော အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ ဋီကာကြီးတွင် - အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာပညာရပ်ကို အပိုင်း ၉ ပိုင်းခွဲထားပြီး အတွဲအားဖြင့် ၃ တွဲရှိသည်။ ပထမတွဲတွင် ဗေဒင်ဟောခန်း၊ ယတြာပြုခန်းနှင့် အခြားသော လောကီစီရင် ထုံးနည်းများ၊ ပဉ္စလက် မျက်လှည့်သဖွယ် အရပ်တစ်ပါးမှ လူကိုလာရောက်စေခြင်း၊ လာရောက်ပြီးလူကို ပြေးသွားစေခြင်း အစရှိသည့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယတွဲတွင် ဗေဒင်ဟောခန်း၊ ဓာတ်ပေးခန်း၊ ဥတုရတု ပိုင်းခြားပုံ အပါအ၀င် ဆေးအတတ် များကိုလည်းကောင်း၊ တတိယတွဲတွင် ဗေဒင်ဟောခန်း၊ ထွက်ရပ်ခန်း၊ ၀ိဇ္ဇာမယ အတတ်များအပါအ၀င် ထွက်ရပ်လမ်းကို ကျင့်ကြံလိုသော ပုဂ္ဂိုလ် တို့အတွက် ပညာရပ်များကိုလည်းကောင်း အသေးစိတ် ရေးသားရှင်းလင်းထားသည်။
ဆရာတော်၏ တိုတောင်း လှသော ဘ၀ သက်တမ်း။
နောင်တော်ကြီးမင်း လက်ထက် မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၄-ခု (ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၆၂-ခုနှစ်) ၊ သက်တော် ၃၈-နှစ်၊ ၀ါတော် ၁၈-၀ါ တွင် စစ်ကိုင်းမြို့သို့ ကြွတော်မူခိုက်- လေရောဂါဖြင့် ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသည်။
ဆရာတော် ရုတ်တစ်ရက် မကျန်းမမာ ဖြစ်နေခိုက်တွင်- ဆရာတော်မှာ- ကျောင်းသား တစ်ဦးအား မြို့ထဲသွားပြီး စနည်း နာစေခဲ့ပါ၏။ စနည်း နာသည် ဆိုခြင်းမှာ- မြို့ထဲရွာထဲတွင် လူတို့အမှတ်တမဲ့- ပြောနေသော စကားကို နားထောင် ကောက်ယူ ခြင်း ဖြစ်၏။ (အတိတ်၊ နိမိတ်၊ တဘောင်၊ စနည်း တို့သည်- အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
စနည်းနာသွားသူ ပြန်လာသော အခါ- သူကြားခဲ့ရသည်မှာ- “သီဘော သုံးဆယ်“ ဆိုသော မိခင်တစ်ဦး၏ ကလေးချော့သံ ဖြစ်ပါသည်ဟု ဆရာတော်အား လျှောက်ရာ- ဆရာတော်မှ-
“ဘော- အချင်းတို့၊ သီ- သီလ ရှိသော၊ ဆယ်- အင်္ဂါသားသည်၊ သုံး- သုဉ်းဆိတ် တော့မည်၊ ဟု ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ငါ့အား ဆေးမကုတော့ နှင့်၊ ငါသည် ဤဝေဒနာ ဖြင့်ပင် သေဆုံးလိမ့်မည်“ ဟု မိန့်မှာသည့် အတိုင်း - ဆရာတော် ပျံလွန်ခဲ့ရပါသည်။
ဆရာတော် ၏ မွေးဇာတာ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက တစ်စုံ တစ်ယောက်၏ မွေးဇာတာကို လေ့လာမည် ဆိုလျှင်- ပထမဦးစွာ ဇာတာရှင် မွေးဖွားသော ရက်၊ ဒုတိယ အနေဖြင့် မွေးဖွားသော အချိန်တို့ကို ဦးစွာ မှန်ကန်ဘို့ လိုပါသည်။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း- ဇာတာရှင် ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော် မွေးဖွားခဲ့သော ကာလသည်- ပထမ ဦးစွာ- သက္ကရာဇ် ၁၀၈၆-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်သည့် အတွက်- ထိုလပြည့်နေ့သည် အမှန်ပင် အင်္ဂါနေ့ ဖြစ်မဖြစ်ကို ဦးစွာ စစ်ဆေးလိုက်ပါသည်။
နေ့ရက် အတွက် ပြန်လည် စစ်ဆေးသော အခါတွင်- အမှန် လပြည့်သော နေ့သည် ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၂၄၊ မေလ ၈-ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ဖြစ်သော်လည်း- ဝေါဟာရ ပြက္ခဒိန် အရ သတ်မှတ်ထားသော မြန်မာ လပြည့်နေ့သည် အင်္ဂါနေ့တွင် ကျရောက် နေသဖြင့် ဆရာတော် ဖွားမြင် ရာ နေ့သည် သက္ကရာဇ် ၁၀၈၆-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့ (ခရစ် သက္ကရာဇ်- ၁၇၂၄-ခုနှစ်၊ မေလ ၉-ရက်၊ အင်္ဂါနေ့) ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့- ထိုနေ့ကာလအတွက် နေထွက်ချိန်၊ နေ၀င်ချိန်တို့ကို လေ့လာကြည့်မိပါသည်။ ဆရာတော် ဖွားမြင်ရာ - မြို့လုလင် မြို့သည် အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၅း၂၉ နှင့် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၀း၀၈ တို့တွင် ဖြစ်ပြီး- ထိုစဉ်ကာလ တွင်- စက်နာရီ မပေါ်သေးသဖြင့် ဒေသ စံတော်ချိန် အနေဖြင့်သာ ယူတွက်ပါသည်။
ထိုစဉ်က မြို့လုလင် မြို့ အနီးအနား တ၀ိုက်တွင် နေထွက်ချိန် Sun rise မှာ - ယခုခေတ် ကာလ စက်နာရီ အားဖြင့် ဆိုပါက- နံနက် ၅ နာရီ၊ ၂၇ မိနစ်၊ ၁၉ စက္ကန့် (၅း၂၇း၁၉.၄၄) တွင် ဖြစ်၍- ညနေ ၆ နာရီ၊ ၂၅ မိနစ်၊ ၂၁ စက္ကန့် (၁၈း၂၅း၂၁.၇၉) တွင် နေ၀င်သည်ဟု တွက်ချက် ရရှိပါသည်။ ကဆုန်လ- နွေရာသီ ဖြစ်သဖြင့် နေ့တာ အတန်ငယ် ရှည်ပြီး- နေ့တာ အားဖြင့် ၁၂.၉၇ နာရီ (၁၂ နာရီ နှင့် ၅၈ မိနစ်ကျော် ရှိပြီး၊ ညတာ အားဖြင့် ၁၁.၀၃ (၁၁ နာရီ နှင့် ၂ မိနစ် နီးပါးမျှ) ရှိပါသည်။ အာရုံဦး အချိန် Dawn ဆိုသည်မှာ နေမင်းသည် အရှေ့အရပ် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းသို့ မရောက်ရှိသေးခင်- တနည်းအား ဖြင့် နေမင်းသည် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းအောက် ၁၈ ဒီဂရီ အကွာ အဝေး ဖြစ်ရာ-၁၈ ကိုတည် ၃၆၀ နှင့် စားပြီး ၂၄ ဖြင့် မြှောက်ပါက ၁.၂ နာရီ ဖြစ်သဖြင့် နံနက် ၄း၃၀ ခန့်သည် အာရုံဦး ချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် Twilight ဆိုသော အာရုံတက်ချိန် တနည်းအားဖြင့် နေရောင်ကို စတင် မြင်ရချိန် မှာ နေမင်းသည် အရှေ့ဘက် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းအောက် ၆ ဒီဂရီ အကွာအဝေတွင် ဖြစ်ပေရာ- အချိန်အားဖြင့်- နေမင်း အမှန်တကယ် နေထွက်သည့် အချိန်ထက် ၂၄ မိနစ်ခန့် စောပါသည်။
မှတ်တမ်းများ အရ- အာရုံတက်ချိန် ဟု ဆိုထားသဖြင့် ဆရာတော် မွေးဖွားသော အချိန်ကို နေမထွက်မီ- နာရီဝက်ခန့် ကာလ အာရုဏ်တက် ချိန်- နံနက် ၅း၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် ဖြစ်ရာ-မိုးတား နည်းစနစ်များနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးပြီးနောက်- နံနက် ၄း၅၀ မိနစ် ဖြင့် ယူဆ တွက်ပါသည်။
ဆရာတော် ၏ မွေးဇာတာ တွင် မြင်တွေ့ရသော ယောဂ ခေါ် ယုဂ်များ
ရှေးကျမ်းအလာ ယောဂ ခေါ် ယုဂ်များဖြင့် ဆရာတော်၏ ဇာတာကို စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ၀ါသနာရှင် တို့ အနေဖြင့် မှတ်သားစေနိုင် ရည်ရွယ်၍ ဖေါ်ပြထားသော်လည်း- ထိုယုဂ် အဟောတို့အား နောက်ခံသဘော နားမလည်ပဲ ပုံသေ မှတ်သား ဟောပြောခြင်း ဖြင့် အဖြေမှန်ကို ရနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကို ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါး များ ဖြစ်သည့်- “ယုဂ် (သို့မဟုတ်) ကံကြမ္မာကို စစ်ဆေးသော ပုံသေနည်းများ” တွင်လည်းကောင်း၊ “ပြည်သူချစ်သော အင်ဒီရာ (သို့မဟုတ်) ပရိဝတ္တန ယောဂ သုံးထပ်ကွမ်း ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီး ၀န်ကြီးချုပ်” ဆောင်းပါးများတွင် လည်းကောင်း ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါ၍- ဆင်ခြင် လေ့လာ စေလိုပါသည်။
သံခရ ၀ိန ယောဂ (ဝေလာကိ ယုဂ်)
တနင်္လာမှ အစ၊ စနေအဆုံး ဂြိုဟ် ၇-လုံး (ရာဟု၊ ကိတ်နှင့် ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပ်ကျွန်း၊ ပလူတို့တို့မပါ) တို့ သည် ရာသီတွင် ၇-ခု တွင် ဖြန်.ကျက် ရပ်တည်ခြင်း ဖြစ်သော်၊ ဤ ယောဂ ကိုရရှိသည်။
ဤဇာတာရှင်သည် ကြွယ်ဝ၍၊ မြင့်မြတ် ကျမ်းဂန်များကို တတ်ကျွမ်းပြီး၊ အက နှင့် အနုပညာ များကို နှစ်ခြိုက်တတ်ကျွမ်းပြီး၊ လုပ်ဆောင် သမျှသော ကိစ္စများတွင် ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခြင်း၊ လူအများ၏ ခိုကိုးရာ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုထားသည်။
တနင်္ဂနွေမှ အပ-ဖြစ်သော ဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္လာမှ ၂-တန့်တွင်ရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။
တနင်္ဂနွေမှ အပ-ဖြစ်သော ဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးသည် တနင်္လာမှ ၂-တန့်တွင်ရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။ ရှေးကျမ်းများ၏ အဆိုအရ- ဤယောဂကို ရသူသည် ရာထူး ဌာနန္တရ မြင့်မား တတ်ပြီး၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ မိမိကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစ ဖြင့် အောင်မြင်ကြီးပွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ လူအများက သိကျွမ်း လေးစားမှုကို ရရှိခြင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုတတ်လျှက်၊ ရောင့်ရဲ ကျေနပ်စွာ ဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေတတ်သည်။
သုနဖ သျှာနီ ယောဂ (သုနဖ ယောဂ မူကွဲ)
စနေသည် တနင်္လာမှ ၂-တန့်တွင်ရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။
ဤအမျိုးအစား သုနဖ ယောဂ ကိုရထားသူ အနေဖြင့်- ဇာတာရှင်သည် ပါးနပ်လိမ္မာ၍ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်သည်။ တောရော မြို့ပါ ဂုဏ်သတင်း ပျံ့မွှေးမည်။ ချမ်းသာ၍ ရောင့်ရဲနိုင်စွမ်းလည်း ရှိသည်။ သို့သော် ဤအနေအထားသည် မိခင် အတွက် သိပ်မကောင်းလှပါ။
တနင်္လာသည် တနင်္ဂနွေမှ နေ၍ ပဏာဖရ အိမ်ကျသော (၂၊၅၊၈၊၁၁) တို.တွင် ရပ်တည်ပါက ဤယောဂကို ရသည်။
ရှေးကျမ်းများ၏ အဆိုအရ- ဤယောဂကို ရသူ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု၊ အတတ်ပညာ နှင့် နာမည် ကျော်ကြားမှုတို.သည် လွန်စွာ မြင့်မားခြင်း မရှိနိုင်ပဲ အလယ်အလတ် တန်းစားတွင် ရှိမည်။
အမလ (ကိရတိ) ယောဂ
လဂ်မှ ၁၀-တန့်တွင် သဘာဝ သောမဂြိုဟ်တစ်လုံးလုံးရပ်တည် သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဖလဒီပက-၆။၁၂)
ဇာတာရှင်သည် အထက်လူကြီး၊ တို.၏ ချီးမြှင့် မြှောက်စားခြင်းကို ခံရလျှက်၊ ရုပ်ဝတ္တု ပိုင်ဆိုင်မှု ချမ်းသာ၊ အလှူဒါန ပြုတတ်သော စရိုက်၊ ကူညီတတ် သော စိတ်ဓါတ်တို.ကြောင့် ထင်ရှား ကျော်ကြားလိမ့်မည်။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇယောဂ (၁)
နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်သွားရောက် ရပ်တည်နေသော ရာသီ၏ အိမ်ရှင်သည် ၄င်းပိုင်အိမ်တွင် နိစ် ဖြစ်သည့် နိစ်သခင် ဂြိုဟ်နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်ထားခြင်း ဖြင့် ဤယုဂ်ကို ရရှိသည်။
ထို.ကြောင့် နိစ် ဖြစ်သော သဘော ပျက်ပြယ်ကာ ရာဇယုဂ် ဖြစ်သော အဆင့်သို.ရောက်ရှိသွားသည်။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇယောဂ (၂)
နိစ်မိသော ဂြိုဟ် ၂-လုံးတို.သည် ၄င်းတို. အချင်းချင်း အပြန်အလှန် မြင်နေကြခြင်းဖြင့် ဤယောဂ ကိုရသည်။
နိစ္စဘင်္ဂ ရာဇယောဂ (၃)
နိစ်မိသော ဂြိုဟ် ဥုစ် ရသော ဂြိုဟ်နှင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း အားဖြင့် ဤယောဂ ကိုရသည်။
ဘရသီ ယောဂ (၁)
၂-တန့်သခင် ရပ်တည်ရာ န၀င်းရာသီ အိမ်ရှင် သည် သည် ဥုစ်ရာသီတွင် ရှိနေပြီး၊ ၄င်းသည် ၉-တန့်သခင် ဖြစ်နေလျှင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင်နှင့် ပူးနေလျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် နာမည် ကျော်ကြားခြင်း၊ ဘာသာရေး လေးစားခြင်း၊ အနုပညာ အလှအပကို နှစ်သက်မြတ်နိုး ခံစားတတ်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ နှင့် လှပသော မျက်လုံးတို.ကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ဖြစ်စေသည်။
ဘရသီ ယောဂ (၂)
၅-တန့်သခင် ရပ်တည်ရာ န၀င်းရာသီ အိမ်ရှင် သည် သည် ဥုစ်ရာသီတွင် ရှိနေပြီး၊ ၄င်းသည် ၉-တန့်သခင် ဖြစ်နေလျှင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင်နှင့် ပူးနေလျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
၄-တန့် အိမ်ရှင်၊ ၅-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၇-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၉-တန့်အိမ်ရှင်၊ ၁၀-တန့်အိမ်ရှင် တို.အနက်မှ တစ်ခုခုသည် လဂ်သခင်အား ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှု ပြုခြင်း၊ တစ်ဖန် လဂ်သခင်မှ လည်း ၄င်းအား အပြန်အလှန်အားဖြင့် ပူးခြင်း၊ မြင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိနေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်။
ဤ ယုဂ်ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် အောင်မြင်မှု၊ အသိအမှတ်အပြု ခံရမှု၊ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာ ပြီး မင်းနှင့်တူသော အဖြစ်ကို ရသည်ဟု ရှေးကျမ်းများက ဆိုထားသည်။
လဂ်နှင့် ဆက်သွယ်နေသော ၅-တန့် အိမ်ရှင် သို.မဟုတ် ၉-တန့်အိမ်ရှင် သည် လဂ် သို.မဟုတ်၊ ၄-တန့် သို.မဟုတ် ၁၀-တန့်တွင် တည်နေပါက ဤယုဂ် ကို ရရှိသည်ဟု ဗြို.ဟစ်ဇာတက ပရာသရ ဟောရသျှတ္တရ ကျမ်းတွင် ပြဆိုထားသည်။ (ဗြို.ဟဇ် ပရသျှရ ဟောရ သျှတ္တရ ကျမ်း၊ ၄၁၊၃၈)
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ နိစ်မိသော ဂြိုဟ်ရပ်တည်ရာ ရာသီ၏ အိမ်ရှင် ဂြိုဟ်သည် စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ၊ လဂ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန့်များတွင် ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၁၃)
ဤဇာတာရှင်သည် ရှင်ဘုရင် သို.မဟုတ် ထိုကဲ့သို. အုပ်ချုပ်ရသော သူ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရာသီစက်တွင် နိစ်မိနေသော ဂြိုဟ်တို.သည် န၀င်းစက်တွင် ဥုစ်ရနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၁၅)
ဤဇာတာရှင်သည် အုပ်ချုပ်သူ အဆင့် အတန်း သို့မဟုတ်၊ မင်း အစိုးရကဲ့သို့- သြဇာကြီးခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးခြင်း ရှိမည်ဟု ဆိုထားသည်။
သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ကျမ်း၏ အဆိုအရ စန်းခေါ် တနင်္လာဂြိုဟ် ရပ်တည်သော န၀င်းရာသီပိုင် အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်သည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်မှ ဖြစ်စေ ကိန်းအိမ် ဖြစ်သော (၁၊၄၊၇၊ ၁၀) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ၊ များတွင် ဖြစ်စေ၊ တြိကုန်း အိမ်များဖြစ်သော (၁၊၅၊၉) အတန့်များတွင် ဖြစ်စေ ကျရောက်ပါက ရာဇယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၂၈)
ဤရာဇ ယောဂကို ရထားခြင်းဖြင့် ဇာတာရှင်သည် သြဇာအာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ မင်းအစိုးရ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ကဲ့ သို. အာဏာရှိခြင်း တို.ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုထားသည်။
နိစ်ဖြစ်နေသော ဂြိုဟ် ရပ်တည်ရာ န၀င်း ရာသီ၏ အိမ်ရှင်သည် လဂ်မှ နေ၍ စရ-ရာသီလည်း ဖြစ်သော ကိန်း (သို.မဟုတ်) တြိကုန်း တွင် တည်ကာ၊ လဂ်သခင် သည်လည်း စရ ရာသီတွင် ရှိနေပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္ထ စိန္တာမဏိ ၉၊၃၆)
ဤဇာတာရှင်သည် လွန်စွာကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော လူသား သို့မဟုတ် အများ၏ ကြည်ညိုခြင်း ခံရသော အုပ်ချုပ်သူဖြစ်မည် ဟု ဆိုထားသည်။
လဂ်သခင်သည် ၂-တန့်၊ ၅-တန့်၊ ၉-တန့်၊ ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
ဤယောဂကို ရပါက-ဇာတာရှင်သည် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လိမ့်မည်။
၂-တန့် သခင်သည် ၅-တန့်၊ ၉-တန့် နှင့် ၁၁-တန့် အိမ်ရှင်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိပါက ချမ်းသာခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ယုဂ်ကို ရသည် ဟုဆိုသည်။
လဂ်ကို ဖြစ်စေ၊ လဂ်သခင်ကို ဖြစ်စေ၊ ကိန်းအိမ်တွင် ဖြစ်စေ၊ တြိကုန်း အိမ်ဖြစ်စေ တွင်ရပ်တည်သော ၉-တန့်သခင်မှ အမြင်ပြုထားပါက ဤယောဂကို ရသည်။ (သာဝတ္တ စိန္တာမဏိ ၇၊၂၊၄၅)
ဇာတာရှင်အနေဖြင့် သဒ္ဓါတရား ကြွယ်ဝခြင်း ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင် မချမ်းသာလျှင် သော်မှ အလှူဒါနကိစ္စများတွင် ပါဝင် တနည်း မဟုတ် တနည်းဖြင့် ပါဝင် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရှိတတ်သည်။ ဘဂျယောဂ၊ ရာဇယောဂ တို.ပါ တွဲဘက် ရှိနေပါက ဤယောဂကို ပို၍ အားကောင်းစေပါသည်။
ကြာသပတေးသည် လဂ်မှ ဖြစ်စေ၊ စန်းမှ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေမှ ဖြစ်စေ ၁၀-တန့်တွင် တည်သော် ဤယောဂကို ရသည်။ (ဗြို.ဟဇ်ဇာတက)
ဇာတာရှင် လုပ်ကိုင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း သို.မဟုတ် ဇာတာရှင် ၏ ဘ၀ အဆင့်အတန်း သည် အသိပညာ၊ ကို အသုံးပြုရခြင်း၊ ပညာသင်ပေးရခြင်း၊ ဥပဒေ၊ ဘာသာရေး၊ အလှူဒါန များ၊ ဘုရားဖူးလုပ်ငန်းများ၊ နှင့် ဆက်စပ် နေတတ်သည် ဟုဆိုထားသည်။
မဟာ ပရိဝတ္တန ယောဂ (၁)
လဂ်သခင် သည် ၂-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၄-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၅-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၇-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
ဤယောဂသည် ဇာတာရှင်အား ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု၊ အဆင့်အတန်းနှင့် ရုပ်ဝတ္ထု ချမ်းသာကို ပေးသော ယောဂ ဖြစ်သည်။
မဟာ ပရိဝတ္တန ယောဂ (၂)
၉-တန့် သခင် သည်၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
တိံည ပရိဝတ္တန ယောဂ (၁)
၆-တန့် သခင် သည် လဂ်သခင် (သို.မဟုတ်) ၂-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၃-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၄-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၅-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၇-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၈-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၂-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
တိံည ပရိဝတ္တန ယောဂ (၂)
၈-တန့် သခင် သည် လဂ်သခင် (သို.မဟုတ်) ၂-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၃-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၄-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၅-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၇-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၂-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
တိံည ပရိဝတ္တန ယောဂ (၃)
၁၂-တန့် သခင် သည် လဂ်သခင် (သို.မဟုတ်) ၂-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၃-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၄-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၅-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၇-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
၃-တန့် သခင် သည် လဂ်သခင် (သို.မဟုတ်) ၂-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၄-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၅-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၇-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၉-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၀-တန့်သခင် (သို.မဟုတ်) ၁၁-တန့်သခင် နှင့် အိမ်ချင်း ဖလှယ်လျှက်၊ ရှိသော် ဤယောဂကို ရသည်။
အာလပ္ပအာယု ယောဂ (၁)
အင်အား နည်းသော လဂ်နှင့် ၈-တန့်သခင် တို.သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်နေကြလျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
ဇာတာရှင်သည် အသက်တိုပြီး အသက် ၃၂-နှစ် အထိသာနေရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
အာလပ္ပအာယု ယောဂ (၂)
အင်အား နည်းသော လဂ်နှင့် နိစ်မူနေသော ၈-တန့်သခင် တို.သည် ပါပဂြိုဟ်တို. လွှမ်းမိုးထားသော ၈-တန့် တွင် တည်နေကြလျှင် ဤယောဂကို ရသည်။
အာလပ္ပအာယု ယောဂ (၃)
၃-တန့်သခင်နှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တို.သည် နေရောင်သင့်နေပြီး၊ ပါပဂြိုဟ်များ၏ လွှမ်မိုးကို ခံနေရလျှင် ဤယုဂ်ကိုရသည်။
ယောဂရိဌ (ယောဂဇ အာယု) ယောဂ (၁)
လဂ်သခင်နှင့် ၈-တန့်သခင် တို.သည် ပါပဂြိုဟ်များ ဖြစ်လျှက်- ၁၂-တန့်နှင့် ၆-တန့်တွင် ကြာသပတေးမှ နေရာယူ ထားခြင်း မရှိပါက ဤယောဂ ကို ရရှိသည်။ (ဇာတက ပရိဇာတ ကျမ်း)
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အသက်၁၈-နှစ် မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်သော အနေအထား ရှိသည်။ (ဤယောဂ ကို တွေ.ရှိပါက အခြားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် ယောဂ များဖြစ်သည့် အရိဋ္ဌ ဘင်္ဂဂ ယောဂများကို ရှာကြည့်ရန် လိုပါသည်။)
ယောဂရိဌ (ယောဂဇ အာယု) ယောဂ (၂)
ပါပဂြိုဟ်များသည် တနင်္လာ၏ အမြင်ကို မရထားပဲ-ကိန်းအိမ်များတွင် တည်လျှက်၊ သောကြာ သို့မဟုတ် ကြာသပတေး နှင့် တနင်္လာသည် ၆-တန့်၊ သို့မဟုတ် ၈-တန့်တွင် တည်ပါက ဤယောဂ ကို ရရှိသည်။ (ဇာတက ပရိဇာတ ကျမ်း)
ဇာတာရှင် အနေဖြင့် အသက်၂၀-နှစ် မတိုင်မီ သေဆုံးနိုင်သော အနေအထား ရှိသည်။ (ဤယောဂ ကို တွေ.ရှိပါက အခြားသော ပယ်ဖျက်နိုင်သည့် ယောဂ များဖြစ်သည့် အရိဋ္ဌ ဘင်္ဂဂ ယောဂများကို ရှာကြည့်ရန် လိုပါသည်။)
ယောဂရိဌ (ယောဂဇ အာယု) ယောဂ (၃)
၈-တန့်သခင်သည် ကိန်းအိမ်တွင် တည်ကာ၊ လဂ်သခင်သည် အင်အား နည်းပါးပါက ဤယောဂ ကို ရရှိသည်။ (ဇာတက ပရိဇာတ ကျမ်း)
ဤဇာတာရှင် အနေဖြင့်- အသက် ၃၀ နှင့် ၃၂ တာ သက်တမ်း ကာလ အတွင်း သေဆုံးနိုင်ဘွယ်ရာ ရှိသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။
ဆရာတော်၏ ဇာတာအား မိုးတား စနစ်ဖြင့် ပူဇော်ခြင်း။
ဆရာတော်၏ မွေးနေ့၊ မွေးချိန်တို့ကို လေ့လာ စိစစ်ပြီးနောက် -တွင် မိုးတား စနစ်များ အရ- အင်အား ဆန်းစစ်လိုက်ရာ အောက် ပါ အနေအထား အတိုင်း မြင်ရပါသည်။
အောင်မြင်ခြင်း၊ ထင်ရှားခြင်း အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေ သည်- ဥုစ် ရာသီတွင် တည်လျှက်- ပညာကို ဖေါ်ဆောင်သော ၅-တန့်ဘာဝ သခင်ဖြစ်ကာ- လဂ်တွင် တည်၏။ မိတ် န၀င်း စီးနင်း၏။ အလွန်ကောင်းသော အနေအထားတွင် တည်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ထိုအချက်သည် ဇာတာရှင်အား ပညာဖြင့် ထင်ရှားမှု၊ ထွန်းလင်းတောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းပါ၏။
တနင်္ဂနွေသည် လဂ်နှင့် ပူးယှဉ် တည်သော်လည်း- လဂ်အံသာ နှင့် အတန်ငယ်ဝေးသော ကြောင့် လဂ်၏ အင်အားကို မထောက်ပံ့နိုင်။ မိုးတား နည်းစနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးသော် အခါ- ဥုစ်ရပါသည် ဆိုသော် တနင်္ဂနွေသည် အဆုံးသတ်တွင် အင်အား နည်းပါးနေ၏။
တစ်ဆက်တည်းတွင် ၈-တန့် ဘာဝတွင် တည်သော စန်းခေါ် တနင်္လာသည် နိစ် ဖြစ်နေသည်သာ မက- ဂြိုဟ်ဆိုးတို့၏ အင်အားလွှမ်းမိုးမှု ကို အကြီးအကျယ် ခံစားထားရ၏။ လဂ် ခေါ် ဥဒယ လဂ္ဂဏ သည် လည်းကောင်း၊ တနင်္ဂနွေ ခေါ် သူရိယ လဂ္ဂဏ သည် လည်းကောင်း၊ စန်းသည် စန္ဒရ လဂ္ဂဏ သည်လည်းကောင်း အားနည်းသွား၏။ တနည်းအားဖြင့် ဖျက်ဆီးထားခြင်း ခံထားရ၏။ အသက်ရှည်ခြင်းကို ထိခိုက်စေ သော အနေအထားပင် ဖြစ်ပါ၏။
ဗေဒင်ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ရန် အတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နှင့် ပညာ ဥာဏ် အတွက် အရေးကြီးသော ကြာသပတေး တို့သည် လွန်စွာ အားကောင်း၏။ သို့သော်- ၆-တန့် သခင် ဗုဒ္ဓဟူး ဂြိုဟ် အနေဖြင့် ရာဟု နှင့် ကိတ်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ထင်ရှားစွာ ရရှိထား၏။ ရာဟုသည်- ပါးနပ် လိမ္မာမှု၊ ပရိယာယ် ကြွယ်ဝမှု နှင့် လျှင်မြန်သော ဥာဏ်အနေအထား၊ ကိတ်သည် ထူးခြားသော စွမ်းရည်တို့ကို ပေးစွမ်းသော လည်း- သဘာဝ ကာရက အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကာရက အားဖြင့် လည်းကောင်း မကောင်းသော ဂြိုဟ်ဆိုးများ ဖြစ်သော ကြောင့်- ဖျက်ဆီး မှုကိုလည်း ပေးနေသည် ဖြစ်၏။ ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီးသော ၆-တန့်ဘာဝသည်- မထင်မှတ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ဖြစ်စေ သည့် ရာဟု- ရုတ်တစ်ရက် မြန်ဆန်စွာ ဒုက္ခပေးတတ်သည့် ကိတ် တို့ကြောင့်- ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေး အနေဖြင့်- ရုတ်တစ်ရက် အန္တရာယ် ရှိနေကြောင်း ပြဆိုနေပါ၏။
ဘာဝ များအရ လေ့လာသော အခါတွင်- ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်မှု များအတွက်၊ စမ်းသပ် စိမ်ခေါ်မှု များအတွက်- အမြဲတမ်း အနိုင်ရရန် အရေးကြီးသော ၆-တန့်ဘာဝသည် အလွန် အားကောင်းနေပြန်၏။ ၆-တန့် သခင် အားကောင်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။
ဥာဏ်ကြီးရှင် တစ်ဦးအတွက် -မရှိ မဖြစ် အရေးကြီးသော သုဘ ဘာဝ ခေါ် ၉-တန့်သည် လည်းကောင်း၊ ဂုဏ်သရေ အဆင့်အတန်းကို ဖေါ်ဆောင်သည့် ၁၁-တန့်ဘာဝ သည်လည်းကောင်း၊ လွန်စွာ အားကောင်း နေခြင်းဖြင့် ဆရာတော်သည် ဥာဏ်ကြီးရှင် အဖြစ် မင်းဆရာ အဆင့် ကို ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဇယားတွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ- ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူသည့် မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၄-ခု (ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၆၂-ခုနှစ်) ၊ တွင် ကိတ် ထူလ ဒဿနှင့် ရာဟု အန္တရ ဒဿာ စားနေခြင်းကို ပြဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခေတ် တစ်ယောက် ထူးခြားသူ- မြန်မာပညာရှင်၊ ကျေးဇူးရှင် ဆရာတော် ခင်ကြီးဖျော်အား ဤဆောင်းပါးဖြင့် ပူဇော် ကန်တော့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်း အနေဖြင့်- ယတြာချေ၊ ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင် ပညာတို့၏ ဘခင် ဖြစ်တော်မူသော ဆရာတော် သည်- မိမိ၏ ကံကြမ္မာ အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် အသက်ရှည်စေရန် ယတြာ မချေခဲ့သည်ကိုလည်း- သတိပြုဘွယ် ဖြစ်ကြောင်း - ဘယ်အရာ မဆို ယတြာ ချေလျှင် ဖြစ်နိုင်သည် ဟု နားလည် နေသူတို့အား- တစ်ဆက်တည်း သတိပြုမိ စေချင်ပါသည်။
ပါရမီရှင်၊ ပညာရှင် (အပိုင်း ၄- အတုလ ဆရာတော် ခင်ကြီ...